Taxanaha Shiinaha ee RCDC Warshada kala soocida korantada ee qaboojinta iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huate
Taxanaha RCDC Fan-qaboojiye korantada
Codsiga:Qalabka birta, warshadda sibidhka, warshadda korantada iyo waax kale, oo loo isticmaalo ka-saarista birta ee slag iyo ilaalinta rullaluistemadka, mishiinka toosan iyo burburinta.Waxa loo isticmaalaa jawi wanaagsan.
◆Naqshadaynta gaarka ah ee socodka hawada, taageere qulqulka axial ayaa ku qasbay hawo qaboojin, mugga hawo weyn, cadaadiska dabaysha oo sarreeya, ka dhigaya kuleylka gariiradda degdega ah.kor u kaca heerkulka hooseeya, farqi yar oo u dhexeeya goobta magnetic.
◆ Gariiraddu waxay qabataa dahaarka sare ee varnished iyo tignoolajiyada daawaynta si looga ilaaliyo gariiradda boodhka iyo gaaska waxyeelada leh iyo in la hagaajiyo waxqabadka dahaadhka ee mashiinka oo dhan, iyo in la hubiyo shaqada joogtada ah ee muddada dheer.
◆Is-nadiifinta, dayactirka fudud, qaab-dhismeedka durbaan-qaabka, suunka oo toos ah oo sax ah.
◆ Si buuxda u shaqeynaya, oo leh gacanta iyo kantarool dhexe, kaas oo buuxin kara shuruudaha isticmaalka waqtiyo kala duwan.
Hore: Taxanaha RCDE Isku-nadiifinta Saliida Qaboojiye Electromagnetic Separator
Xiga: Taxanaha RCDA Fan-qaboojinta Electromagnetic Separator
Taxanaha CFLJ Rare Earth Roller Magnetic Separator
MBY (G) Taxanaha buuxdhaafay Rod Mill
RCDFJ Shidaalka Ku Qasabka ah ee Wareegga Is-nadiifinta Elec...
Taxanaha CTY ee Qoyan Joogta ah Magnetic Pre-Sparator